Afti u qaadis - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Canshuur bixiyeyaasha degmada waxaa laga codsan doonaa inay cusbooneysiiyaan canshuuraha shaqeynaya ee dhacaya Noofambar 2, 2021, iyo sidoo kale inay tixgeliyaan maaliyad cusub oo gacan ka geysaneysa dayactirka - iyo suurtagalnimada ballaarinta - barnaamijyada ardayda. U fiirso faahfaahin dheeraad ah oo halkan lagugula wadaago markay noqdaan kuwo la heli karo.
Waqtiga ayaa kudhaafaya canshuurtii hada jirtay ee degmada
Canshuurta hawlgalka, oo markii hore la marsiiyay 2013, waxay dhacaysaa dhammaadka sanad-dugsiyeedka 2021-2022. Haddii canshuuro cusub aan la oggolaan, degmadu waxay waayi doontaa inta u dhexeysa $ 11 illaa $ 12 milyan oo maalgelin sannadle ah waxayna la kulmi doontaa hoos u dhac weyn oo xagga shaqaalaha iyo barnaamijyada ah.
Muxuu Noqon Doonaa Codbixinta?
Guddiga dugsigu wuxuu tixgelinayaa laba su'aalood oo codbixin oo kala duwan - mid lagu beddelayo canshuuraha dhacaya iyo mid labaad oo lagu caawinayo maalgelinta tikniyoolajiyadda. Canshuur bixiyeyaasha ayaa sahan lagu sameyn doonaa xagaagan si ay uga soo ururiyaan fikradaha ku saabsan inta bulshadu ay doonayso inay maal gashato si ay u taageeraan dugsiyada. Go'aanka ugu dambeeya ee waxa kasoo muuqan doona codbixinta Noofambar 2, 2021 waxaa la filayaa bartamaha Ogosto. La soco macluumaad dheeri ah.
Su’aal Suurtagal ah 1
Cusboonaysii canshuuraha dhacay oo waxaad siisaa dakhli dheeri ah oo kaa caawiya in la sameeyo farqiga u dhexeeya maalgelinta.
Su’aal Suurtagal ah 2
Taageer barnaamijka tiknoolajiyada 1: 1 oo maalgeli kharashyo kala duwan oo teknoolojiyad la xiriira oo hadda laga bixiyo maaliyadda guud, oo ay ku jiraan aaladaha, kaabayaasha iyo shaqaalaha.
Wax ka qabashada Baahiyaha Maalgelinta - Nofeembar 2, 2021
Canshuurta hawlgalka ee waqtigeedu dhammaaday waxay u dhigantaa ugu yaraan 12% wadarta guud ee miisaaniyaddayada hawlgalka. Canshuurtu waxay ka caawisay xasilinta maalgelinta sideedii sano ee la soo dhaafay, taas oo noo oggolaaneysa inaan sii wadno qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadeena iyo shaqaalaheena. Laakiin xitaa iyada oo canshuuraha la saaray, waxaan ku qasbanaanay inaan sameyno dhimista miisaaniyada iyadoo ay ugu wacan tahay sicir bararka, kor u kaca qiimaha, hoos u dhaca maaliyadeed ee gobolka iyo waajibaadka aan la bixin.
Canshuuraha Tiknoolajiyadda (Mashruucyada Cashuurta Levy)
Xaqiiqooyinka Levy Fast
Guddiga dugsigu waxay tixgelinayaan inay ku daraan su'aal codbixinta taas oo cusbooneysiin doonta canshuuraha dhacaya isla markaana siin doonta dakhli dheeri ah si ay uga caawiso in laga dhigo farqiga maalgelinta sannadlaha ah
Maxay tahay sababta canshuuraha lagu beddelayo? Sababtoo ah cusbooneysiin toos ah kuma filna
Xitaa iyada oo canshuuraha hadda jira, degmadu ay ahayd in ay sameyso dhimista miisaaniyadda 3 ka mid ah 8dii sano ee la soo dhaafay - wadar ahaan $ 7 milyan. Taasi waa sababta oo ah waxaan ku tiirsan nahay maalgelinta gobolka si aan u bixinno biilashayada, laakiin maalgelintaas ayaan la jaan qaadin sicir bararka. Farqiga udhaxeeya kaalmada sanadlaha ah ee gobolka iyo sicir bararka qaaciddada kabadan ayaa kabadan $ 500 ardaykiiba - una dhiganta kudhowaad $ 4 milyan dakhligii lumay ee dugsiyadeena.
Canshuur beddelka ayaa u oggolaan doonta degmada inay sii waddo barnaamijyada hadda jira ee ardayda iyo wax ka qabashada hoos u dhaca miisaaniyadda socota:
Lacag yaraanta gobolka
Awoodda aan la maalgelin
Guddigu wuxuu tixgelinayaa inuu codbixiyeyaasha weydiisto inay taageeraan cashuurta tikniyoolajiyadda. Waxaan ka mid nahay degmooyin faro ku tiris ah oo ku yaal aagga metro ayada oo aan lahayn ilo dhaqaale oo gaar ah oo loogu talagalay teknolojiyadda iyada oo loo marayo canshuurta noocaan ah.
Ha la yaabin haddii aad ku aragto tan loo yaqaan "Mashruucyada Cashuurta Levy for Technology" ee warqadda cod-bixinta - taasi waa luuqadda rasmiga ah ee gobolka bixiso.
Canshuurta tiknoolajiyada ayaa:
Taageer barnaamijka tikniyoolajiyada 1: 1 oo siinaya arday walba fursad uu ku heli karo qalab guriga iyo dugsiga labadaba
Bixi kharashyada kala duwan ee tikniyoolajiyadda ee hadda laga bixiyo maaliyadda guud, oo ay ku jiraan:
Waxaan ku bixineynaa wax ka yar ardaykiiba degmooyin ka tirsan toddobada degmo ee metro:
Toddoba Celcelis Aagga Aagga Degmooyinka: $ 16,285 / ardayga (ADM) loo adeegay
Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater Area: $ 15,469 / arday (ADM) ayaa u adeegay
Xigasho: Soo Koobid Hantidhowr Fulineed p.18
Waxaan ka mid nahay degmooyin faro ku tiris ah oo metro ku yaal iyada oo aan lahayn ilo dhaqaale oo loogu talagalay teknolojiyadda. Degmooyinka badankood waxay leeyihiin cashuur tiknoolaji ah oo bixiya kombuyuutarrada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo xitaa shaqaalaha tiknoolajiyadda - iyagoo lacag u siinaya sanduuqa guud si dib loogu maalgeliyo barnaamijyada carruurta.
Haddii aad ka qaadan karto gurigaaga una wareejin karto degmo dugsiyeed kasta oo kale oo ka tirsan gobolka, waxaad ku bixin lahayd wax ka badan canshuuraha iskuulka. Taasi waa sababta oo ah heerka cashuurta ee dugsiyada Stillwater uu ka hooseeyo degmooyinka aan deriska nahay.
Wax ka qabashada Baahiyaha Xarunta - Codsiga Mustaqbalka
Guddiga dugsiga waxaa laga filayaa inay u keenaan codbixiyaasha afti dammaanad 2022. Dib u dhigista illaa 2022 waxay u saamaxaysaa degmadu inay diirada saarto canshuurta hawlgalka dayrta, iyo sidoo kale booska waxbarasho iyo baahiyaha xarunta, tixgelinta hagaajinta xuduudaha, iyo daawashada isbeddelada isqorista ee sanadka soo socda. Mashaariic kasta oo lagu ansixiyo aftida dammaanadda 2022 waxay u badan tahay in la dhammaystiro inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka 2024-2025.
Iyada oo ka mid ah daraasadaha xarumaha fog-fog ee 2020, Kooxda Naqshadeynta Bulshada (CDT) waxay ogaadeen baahiyo badan - tan ugu weyn ee la siinayo ayaa ah inay siiso meelo badan ardayda ku nool qeybta koonfureed ee degmada. Iyadoo koror la taaban karo uu ka dhacay Lake Elmo iyo Woodbury, kooxdu waxay ku talisay in la beddelo gabowga Lake Elmo Elementary, iyadoo lagu darayo Dugsiga Hoose ee Brookview iyo in horumar kale laga sameeyo xarumaha degmada si wax looga qabto sinaan la'aanta ka jirta goobaha wax lagu barto iyo ciriiriga badan.
TALOOYINKA KOOXDA QEYBTA BULSHADA